« Mibebaha: Ny tarehy ratsy no tsy azo ovàna fa ny toetra ratsy azo ovàna »
Alahady tsotra fahatelo. Alahady isantarana ny fandinihana ny fiainan’i Jesoa Kristy niseho imasom-bahoaka taorian’ny fiomanany tamin’ny nandraisany ny batemin’i Joany sy nitokanany efapolo andro sy nalaina fanahy tany an-taniefitra.
« Samy nantsoin’Andriamanitra tsirairay isika… »
Nifarana tamin’ny alahady fankalazana ny Batemin’ny Tompo ny alahady fety fankalazana ireo mistery lehibe teo amin’ny fiainan’i Jesoa ; ny fahaterahany, ny fisehoany tamin’ny firenena ary ny nandraisany ny batemin’i Joany. Ny anio...
Haja il y a 4 mois
« I Jesoa natao batemy: tandindon’ny Batemintsika »
Ny fanetren-tenan’i Joany Ny fanetren-tenan’i Jesoa Ny fankatoavan’ny Ray: Ny fanosoran’ny Fanahy Masina Tandidon’ny Batemintsika: ireo no hevi-dehibe atolotra aantsika amin’izao alhady faharoa amin’ny taona 2021 izao. Natolotra hiomanantsika ary koa hiainatsika ny hafatra mandritra ny herinandro vaovao.